SR 900 – Martin Luther King Jr. Way South Daraasada Jidk – Xogta Jajabka | WSDOT
SR 900 – Martin Luther King Jr. Way South Daraasada Jidk home
Tallaabooyinka xiga iyo sahaminta
homeagency projectsOnline open housesSR 900 – Martin Luther King Jr. Way South Daraasada JidkXogta Jajabka
SR 900 – Martin Luther King Jr. Way South Daraasada Jidk – Xogta Jajabka
Yoolka WSDOT ayaa ah inaysan jirin cid ku dhimata iyo/ama dhaawac xun kasoo gaaro wadooyinka gobalka Washington marka lagaaro 2030. Daraasada Marinka SR 900 waxaa ku jiri doona dib u eegista faahfaahsan ee dhammaan jajabka marinka ee dhacay shantii sano ee lasoo dhaafay, ayna ku jiraan isku dhacyada dadka wadada goynaayay. Boggaan wuxuu dulmar heer sare ah ka bixinayaa iskudhacyadaan iyo goobaha ay ka dhaceen.
Sawirka hoose wuxuu muujinayaa iskudarka dhammaan noocyada shilalka ka dhacay marinka SR 900 intii u dhaxaysay Janaayo 2015 ilaa Juun 2020, ayna ku jiraan shilalka gaariayasha iyo dadka lugaynaaya. Tirada ugu badan ee shilalka ayaa ka dhacay dhacay isgoyska wadada South 129th Street.
Sawirka 1 wuxuu muujinayaa burburka xagasha ee ka dhacay isgoyska wadada South 129th Street shantii sano ee lasoo dhaafay. Burburka xagasha ayaa dhaca marka baabuurtu samaynayaan leexasho. Calaamadaha cagaaran ayaa muujinaaya tilmaamaha meelaha burburka badan ka dhacay. Burburka la xariira dadka lugaynaaya ee isgoyskaan ayaa lagu muujiyay saiwrka 4, ee hoose.
Ogoow: Burburada dheeraadka ah ee la xariira saxmada wadada ee aan sida cad loogu muujin sawirkaan.
Guji sawirada si aad u waynayso.
Sawirka 1: Burburka xagasha ee marinka SR 900 iyo South 129th Street
Sawirka 2 wuxuu muujinayaa dhammaan burburka ka dhacay isgoyska wadada South 133rd Street shantii sano ee lasoo dhaafay. Calaamadaha cagaaran ayaa muujinaaya tilmaamaha meelaha burburka badan ka dhacay. Burburka la xariira dadka lugaynaaya ee aagaan ayaa lagu muujiyaySawirka 6.
Sawirka 2: DHammaan Burburka ka dhacay marinka SR 900 iyo South 133rd Street
Sawirka 3 wuxuu muujinayaa dhammaan burburka ka dhacay isgoyska 68th Avenue South shantii sano ee lasoo dhaafay. Calaamadaha cagaaran ayaa muujinaaya tilmaamaha meelaha burburka badan ka dhacay. Ma jiraan burburada la xariira dadka lugaynaaya oo goobtaan ka dhacay.
Sawirka 3: DHammaan Burburka ka dhacay marinka SR 900 iyo 68th Avenue South
Shilalka dadka lugaynaaya
Sawirada soo socda waxay muujinayaan goobaha shilalka dadka lugaynaaya ka dhaceen marinka SR 900 shantii sano ee lasoo dhaafay.
Isgoyska South 129th Street (Sawirka 4), waxa ajiray afar shil oo la xariira dadka lugaynaaya, kuwaasoo sadex kamid ah ay ka dhaceen meesha wada laga gooyo ee la calaamadeeyay. Falaaraha cas iyo goobinta ka muuqda sawirka ayaa muujinaaya dadka lugaynaaya, halka falaaraha madoow ay muujinayaan gaariyaasha.
Sawirka 4: Shilka dadka lugaynaaya ee marinka SR 900 iyo South 129th Street
Waxaa jiray hal shil oo la xariira dadka wadada ku lugaynaayay aaga wadada 64th Avenue South,kadib markii gaari gujiyay qof ku lugaynaayay geeska wadada (Sawirka 5).
Sawirka 5: Shilalka dadka lugaynaaya ee ka dhacay marinka SR 900 iyo 64th Avenue South
Waxaa jiray hal shil oo la xariira dadka wadada ku lugaynaayay aaga wadada South 133rd Street, kadib markii gaari gujiyay qof gooynaayay marinka SR 900 (Sawirka 6).
Sawirka 6: Shilka dadka lugaynaaya ee marinka SR 900 iyo South 133rd Street
Waxaa jiray laba shil oo la xariira dadka lugaynaayay oo ka dhacay aaga isgoyska South 135th Street: Hal wuxuu ka dhacay meesha laga gooyo wadada aada Creston Point Apartments, iyo hal markii gaari ku dhacay qof goynaayay wadada SR 900 (Sawirka 7).
Sawirka 7: Shilka dadka lugaynaaya ee marinka SR 900 iyo South 135th Street
Sida ku cad Xeerka 23 U.S. § 148 iyo Xeerka 23 U.S. § 409, xogta badqabka, warbixinnada, xog aruurinnada, jadwalada, liisaska la aruurshay ama lagu diyaarshay ujeedada aqoonsiga, qiimaynta, iyo qorshaynta hormarinnaa badqabka ee baraha shilalku ka dhalan karaan, xaaladaha khatarta ah ee wadooyinka, iyo meelaha ay iska gooyaan wadada wayn iyo tareenku maaha kuwo la shaacin karo ama laguma soo gudbin karo cadayn ahaan Maxkamada Federaalka ama Gobalka ama looma arki karo ujeedooyin kale oo talaabo kasta oo la xariirta waxyeelo ka timaada shil ka dhacay meesha la sheegay ama lagu qeexay warbixinnadaas, xog aruurinnadaas, jadwaladaas, liisaskaas, ama xogtaas.
Guji batoonka “Next” si aad u aragto talaabooyinka xiga.